१३ सय डाक्टर बिरामी जाँच्न अयोग्य – Khabar batika
- फेल हुने अधिकांश बंगलादेशमा अध्ययन गरेर आएका डाक्टर
एमबिबिएस उत्तीर्ण भए पनि १३ सय डाक्टर बिरामी जाँच्न भने अयोग्य छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक लाइसेन्स (नाम दर्ता) परीक्षामा फेल हुँदा उनीहरू अयोग्य ठहरिएका हुन् । लगातार ३६ पटकसम्म फेल भएका डाक्टर पनि छन् । विश्वविद्यालयबाट हुने परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि बिरामी जाँच्ने वैधानिकता लिन काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा पास हुनैपर्छ । काउन्सिल स्रोतका अनुसार फेल हुने अधिकांश बंगलादेशमा अध्ययन गरेर आएकाहरू छन् ।
पटक–पटक फेल भएका डाक्टरहरू लाइसेन्सको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र शुक्रबार मेडिकल काउन्सिलमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । यो आन्दोलनको अगुवाइ डा. राम थापा क्षेत्रीले गरेका छन् । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले बंगलादेश पढेर आएका क्षेत्री लाइसेन्स परीक्षामा नौपटकसम्म फेल भएको बताए । क्षेत्री नेतृत्वको आन्दोलनमा ३६ पटकसम्म फेल भएकासमेत रहेको उनले बताए । सबै १३ सय डाक्टरलाई लाइसेन्स दिलाउन उनीहरूको माग छ ।
बंगलादेशमा पढेर आएका, तर लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएकाहरूले आन्दोलनका लागि चिकित्सक संघ गठन गर्ने अभियानसमेत अघि बढाएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेको थियो । काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष डा. नारायणबहादुर थापाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्न सकिने बताए ।
उनीहरूले लाइसेन्स परीक्षाको प्रश्नपत्र र नतिजा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, फेल भए पनि सरकारी अस्पतालमा सिनियर चिकित्सकको सुपरभिजनमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने, परीक्षाको प्रश्न प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा पनि स्नातक तहमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा हुनुपर्नेलगायत माग पनि गरेका छन् ।
– अर्जुन अधिकारी/नयाँपत्रिका
पेस्तोल सहित पक्राउमा परेका जेल चलान
तनहुँ, भाद्र १९ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले आह्वान गरेको घाटको निकासी टेण्डर दर्ताको दिन पेस्तोल सहित पक्राउ परेका दुई युवालाई सोमबार कारागार चलान गरिएको Post Views: 54 Read More
सरकारकाे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त गरेको बृद्धभत्ता वापतको रकम एक बृद्धले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेका छन् । खाेटाङकाे खार्मी गाउँ घर भई काठमाण्डाैमा छाेराहरूसंग बस्दै अाएका ७९... Read More
अादिकविका विद्यार्थी अदालतमा!
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस स्नातकोत्तर, स्नातक र उच्चमाध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी र प्राध्यापक संलग्न टोलीले बुधवार Post Views: 49 Read More
क्रियापुत्री भवनलाई अमेरिकाबाट ७ लाख !
दमौली – अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका तनहुँबासीले दमौलीमा निर्माणधिन क्रियापुत्री भवनका लागि ७ लाख रूपैया सहयोग गरेका छन् । अमेरिकामा संकलित रकम तनहुँ अमेरिका सोसाईटीका Post Views: 76 Read More